Ikhebula le-Extrusion Material, Ukugcwalisa Izinto, I-Tape Yokufaka - UMHLABA OWODWA
Uchungechunge Lwezinto Zokukhipha
Ukugcwalisa Uchungechunge Lwezinto
Semi-conductive Tape Uchungechunge
I-Flame-retardant Tape Series
Uchungechunge lwe-Metal Tape
I-Copper Clad Aluminium-magnesium Alloy Wire
Amabili emaceleni e-Fibre Indwangu Yokwenziwa Mica Tape
Ithephu Ye-Copper Foil Mylar Tape Yokuvikela Ikhebula
I-Polyester Ifilimu / I-Polyester Tape / I-Mylar Tape
Lashukumisa Steel Wire ngoba Ikhebula Stranding
Ithebhu yeNayiloni eqhuba kabili
Ithebhu Yendwangu Engalukiwe
Intambo yokugcwalisa eyi-Semi-conductive
Gxila ekusonjululweni kwentambo nekhebula
Siza ukuthuthukiswa okusheshayo kwentambo nentambo
Ehola ngobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu
Ngobachwepheshe bethu kwezobuchwepheshe bokukhiqiza, futhi sibambisana nesikhungo sokucwaninga ngocingo kanye nekhebula, ozakwabo, ukuthuthukisa izintambo nezinto zekhebula ngokusebenza kangcono nezindleko eziphansi.
Amasampula wamahhala wokuhlolwa (Akubandakanyi izinto zokwengeza)
Siza ikhasimende ukukhetha izinto ezifanele
Ukuhlolwa kwezinto ezisetshenzisiwe ngaphambi kokuthumela
Imvamisa, izimpahla zizothunyelwa zingakapheli izinsuku eziyi-7 kuya kwezingu-15 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda.
Amathani we-Aramid Yarn athunyelwa eVietnam
Kuyasithokozisa ukuhlanganyela ukuthi sisanda kuletha amathani ama-2 we-Aramid Yarn kumakhasimende ethu avela eVietnam. Intambo ye-Aramid isetshenziswa kakhulu njengokuqiniswa okungekhona okwensimbi kwezintambo ezibonakalayo ze-ADSS, izintambo ezibonakalayo ezingaphandle kwensimbi nezintambo ezibonakalayo zasendlini. (Ukupakisha Intambo Ye-Armaid) Leli khasimende yikhasimende elisha kithi. Ngemuva kokuqhathanisa ngokucophelela imingcele yezobuchwepheshe nezintengo, nokuhlola amasampula wamahhala esiwanikezele, ekugcineni sifinyelele ekubambisaneni. Ngikholwa ukuthi ukubambisana kwethu kwesikhathi esizayo kuzoba ...
Ukuhanjiswa Kwentambo Yethusi Eboshwe Ngethini
Kule nyanga, i-One world cable material ithumele enye inqwaba yocingo oluthambile lwethusi e-Algeria. Ithebula elenziwe ngokhuni elenziwe ngetini lisetshenziselwa izintambo zezimayini ezifakwe iraba, izintambo ezithambile, izintambo ezithambile nezintambo zasolwandle njengocingo oluhamba phambili lwentambo, futhi lusetshenziswa njengolwelwesi lwentambo lwangaphandle lolukhiye nolayini webhulashi Intambo eboshiwe yethusi ifakwe ungqimba ebusweni bensimbi engenalutho evalekile ukuze kuvinjelwe uketshezi kwentambo yethusi. Sikhiqiza okunamathiselwe ...
Amathani ayi-12 eMylar Tapes athunyelwa ePhilippines
Siyajabula ukwaba ukuthi sisanda kuletha amathani ayi-12 wamatheyiphu e-polyester kumakhasimende ethu avela ePhilippines. Le yi-oda elibuyayo futhi, ikhasimende elake lathenga amanye amateyipu kasayizi we-polyester ngaphambili, bayalibona ikhwalithi yemikhiqizo yethu namandla ethu okuhlinzeka kakhulu, ngoba singanikeza noma ikuphi ukujiya kweteyipu ye-polyester amakhasimende ayidingayo, kusuka ku-10um kuye ku-100um, noma yimuphi usayizi kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo. Ngaphezu kwalokho, sinikela ngokuncintisana kakhulu ...
Ikheli: Xinsheng Plaza, Hubei Road, Xuzhou, China
Umakhala ekhukhwini: 0086-15162145573